China Wifi Yakangwara IP66 Yekunze Socket, Imwe Art# SNW-S fekitori nevagadziri | Feilifu
Neiyi WiFi isina mvura socket iwe unogona kudzora zvishandiso zvemagetsi kubva kune yako smartphone kana piritsi. Izvi zvinogoneka kubva mukamuri yega yega mumba mako, asi zvakare kure kure. Iyo WiFi isina mvura socket yakanakira kushandiswa kunze kwemba, nekuda kwevhavha yakazara isina mvura inodzvanya pamusoro pesocket. Iyo socket isingapindi mvura inogona kukwidzwa pachinzvimbo cheyakajairwa socket, uye inogona kushandiswa seyakajairwa socket mukuwedzera kune akasiyana mabasa akangwara.
A: Isu tiri fekitori, inyanzvi pre-kutengesa uye mushure-yekutengesa sevhisi timu, tinopa OEM / ODM sevhisi.
Mubvunzo: Unogona kupa sampuli yemahara?
A: Sample haisi yemahara, asi isu tichadzosera mari yekuenzanisira kubva kune inotevera yakawanda odha.
Mubvunzo: Unogona here kupa OEM sevhisi?
A: Hongu, mutengi LOGO inoshanda.
Q: Ndezvipi zvitupa zvaunazvo?
A: Tinogona kupa CE uye ROHS kune zvigadzirwa zvedu. Zvimwe zvitupa zvinogona kutaurirana.
Mubvunzo: Zvakadini nezvemashoko ako ekutumira?
A: 1. Sample order: anenge 3-7 mazuva mushure mekubhadhara kwakasimbiswa.
2. Kurongeka kwehuwandu: anenge 15-25 mazuva mushure medhipoziti yakasimbiswa.
A: T/T 30% pachine nguva, 70% isati yasvika. Mamwe mazwi anogona kutaurirana.
Zvakapfuura: Yakachipa PriceList yeChina IP66 13A Yepamusoro Hunhu MP2gec Kaviri Enclosure Empty Enclosures
Zvinotevera: Akavimbika Mutengesi China EU Type yeDesktop Sockets Clamping Desktop Sockets Yakarembera Desktop Sockets Tafura Power Board
Smart Chiedza Chinja
China Cheap mutengo China Flush-Mounting Hidden E...
China Smart plug ine Wireless Switch Socket wi...
Professional Dhizaini China Kitchen Tafura Bhokisi/Flo...
Yakachipa PriceList yeChina Australian Travel Pow...